Apple inotangisa chirongwa chegore rose chekunyorera kuApple Music iyo yatino chengetedza makumi maviri euros | Ndinobva mac
Apple inotangisa chirongwa chegore rose chekunyorera kuApple Music iyo yatino chengetedza makumi mairi euros
Kamwe Apple yatanga mune dzimwe nyika, uko Spain iri, kurega kupa mwedzi-mitatu yemahara muedzo, uye pachinzvimbo vanopa mwedzi mitatu yekunyorera kwe0,99 euros, vakomana vanobva kuCupertino vari kufambisa tab munzira dzakasiyana dzekunyorera dzavanopa kune vese vashandisi.
Kwemaawa mashoma, Apple yaunza imwe nyowani yekunyorera system kuApple Music, sarudzo nyowani inotemerwa pamadhora 99 kana tikabhadhara gore rese rekunyorera kamwechete, iyo inotibvumidza isu kusevha makumi mairi euros pakupera kwegore. Panguva ino sarudzo iyi inongowanikwa kune vashandisi vezvirongwa zvega, kwete zvehurongwa hwemhuri.
Parizvino vakomana veCupertino vane vanyoreri mamirioni makumi maviri nemanomwe, sezvakaziviswa nekambani mune yekupedzisira WWDC 27, nepo yakanyanya, uye isu tingati chete muvengi, Spotify ine vanopfuura mamirioni makumi mashanu vanyoreri vakawedzera kune avo vanoteerera kushambadziro kunakirwa mimhanzi yavo, chimiro chinosvika 2017 mamirioni evashandisi. Kuita shanduko isu tinongofanira svika kuApple ID yedu kuburikidza neTunes kana neApp Store kana tikazviita kubva kune chishandiso cheIOS uye tinya pazvinyoreso.
Tevere isu tinofanirwa kushandura kunyoreswa kwemwedzi wega kwe9,99 euros yekunyoreswa kwegore kwe99,99 euros. Iko kuunganidzwa kweiyi nyowani yekubhadhara nzira ichaitwa pakupera kwemwedzi, kana inoenderana Mwedzi wekunyorera weApple Music wapera uye ichatibvumidza kunakidzwa neApple Music kwegore rese. Kukwidziridzwa uku kwakafanana chaizvo neizvo Apple Music yakatipa kwenguva yakareba kuburikidza neApple Music makadhi echipo, makadhi echipo ane mutengo we99 euros uye anotipa mukana weApple yekumhanyisa mimhanzi sevhisi kweGore rese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple inotangisa chirongwa chegore rose chekunyorera kuApple Music iyo yatino chengetedza makumi mairi euros
Nike + Run Club gadziriso: tinogona kuenda kunomhanya neApple Watch chete
Iyo Apple Watch inoramba ichiwedzera, ikozvino yave kuwanikwa muSports Chek zvitoro muCanada